नजिक न्युज | 'गणितसँग डराउनु पर्दैन'
मुम्बई : शकुन्तला देवीको जीवनमा आधारित फिल्म ‘शकुन्तला देवी’ ३१ जुलाईबाट अमेजन प्राइममा देखाउने तयारी भइरहेको छ। धेरै मानिस गणित पढ्न गाह्रो मन्छन्। तर शकुन्तला देवी गणितका ठूलाठूला समस्या क्षणभरमा समाधान गरिदिन्थिन्। उनलाई ‘ह्युमन कम्प्युटर’को उपमा दिइएको थियो। उनको जीवनकथा धेरै रोचक छ। त्यसैले यसलाई ठूलो पर्दामा देखाउने निर्णय गरिएको थियो जसले गर्दा बच्चाको दिमागबाट गणितप्रतिको डर हटोस्।
शकुन्तला देवीको भूमिका बलिउडकी प्रतिभाशाली अभिनेत्री विद्या बालनले निर्वाह गरेकी छन्। फिल्मको एउटा गीत ‘पास नहीं तो फेल नहीं’ सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्या लगभग ६ हजार व्यक्तिको साथमा थिइन्। कार्यक्रममा स्कुलका प्रिन्सिपल, शिक्षक, विद्यार्थी र मिडियाकर्मी पनि थिए। यो समारोहमा गीत सार्वजनिक गरिएको थियो र विद्यासँग भलाकुसारी पनि गरिएको थियो।
के विद्यालाई गणित मन पर्छ ? उनी विद्यार्थी जीवनमा गणितकी कस्ती विद्यार्थी थिइन् ? यस्ता प्रश्न उनलाई सोधिएको थियो। उनले भनिन्, ‘म गणितमा राम्रो थिएँ। मलाई नम्बरसँग खेल्न मन पथ्र्यो। म अक्सर कार वा बसको नम्बर प्लेट हेर्थें र ती नम्बर जोड्थेँ।’ उनलाई फोन नम्बर पनि याद हुन्थ्यो।
के उनले शकुन्तला देवीको बारेमा सुनेकी थिइन्? ‘जब म सानो थिएँ, मलाई शकुन्तला देवीका बारेमा ज्यादा जानकारी थिएन। तर नाम भने सुनेकी थिएँ। गणितका सवाल तुरुन्तै हल गर्छिन् भन्ने जानकारी थियो’ उनले भनिन्।
शकुन्तला देवीको जीवनमा त्यस्तो के छ जसलाई ठूलो पर्दामा देखाउनु जरुरी छ? यस प्रश्नमा विद्या भन्छिन्, ‘गणितसँग धेरै विद्यार्थी डराउँछन् जब कि जिन्दगीमा गणित सबैतिर छ। तपाईं समय हेर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ गणित कहीँ न कहीँ आउँछ। फिल्मले जानकारी गराउने छ कि गणित धेरै रमाइलो पनि छ।’
शकुन्तला देवीको तारिफ गर्दै विद्या भन्छिन्, ‘यो फिल्मको तयारीका क्रममा मैले उनलाई नजिकबाट चिनेँ। मैले यस्ती महिला देखेको थिइनँ। शकुन्तला निडर थिइन्। ह्युमन कम्प्युटर थिइन्। उनले धेरै किताब लेखेकी छन्। धेरै देश घुमिन्। गणितीय सोमा ठूलाठूला हस्तीसँग सामना गरिन्। ज्योतिषमा उनले महारथी हासिल गरिन्। उनलाई जीवन धेरै प्यारो थियो। भोजनप्रेमी उनी पहिरन र नृत्यकी सोखिन थिइन्।’
फिल्मको गीत ‘पास नहीं तो फेल नहीं’का बारेमा विद्याले भनिन्, ‘यो गीत ८० बच्चाको साथमा सेन्ट जेभियर्स कलेज मुम्बईमा फिल्माइएको थियो। बच्चाहरूसँग सुटिङ गर्न निकै रमाइलो भयो।’
अनु मेननद्वारा निर्देशित र सोनी पिक्चर्स नेटवक्र्स प्रोडक्सन तथा विक्रम मल्होत्राद्वारा निर्मित शकुन्तला देवीमा विद्या बालनको साथमा जिसु सेन गुप्ता, सान्या मल्होत्रा र अमित साध प्रमुख भूमिकामा छन्। फिल्मको पटकथा अनु मेनन र नयनिका महतानीले लेखेका हुन् भने संवाद इसिता मोइत्राले लेखेकी हुन्। एजेन्सी
बिहिबार ०८, साउन २०७७ ०२:४० मा प्रकाशित